झाँक्री कति जुझारु, शिक्षकको हात खुट्टा भाचिदिने रे ! – Everest Dainik – News from Nepal
झाँक्री कति जुझारु, शिक्षकको हात खुट्टा भाचिदिने रे !
अहिले रामकुमारी झाँक्रीको सर्वत्र चर्चा छ । फेसबुकलगायत सामाजिक सञ्जालहरुमा उनको चर्चा अत्याधिक बढेको छ । अखिल नेपाल राष्ट्रिय स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन (अनेरास्ववियु) की पूर्वअध्यक्ष तथा जुझारु राजनीतिज्ञ झाँक्रीको चर्चा हुनुको कारण भने स्थानीय तह दोस्रो चरणको निर्वाचनअघि आफ्नै गाउँका एक जना शिक्षकलाई फोनमार्फत गालीगलौच तथा अश्लिल शव्द प्रयोग गरेको अडियो सार्वजनिक हुनुले हो ।
गाउँ समाजमा रहेको असमानता सही राजनीतिक व्यवस्था र विचारले मात्रै हटाउन सकिन्छ भन्दै राजनीतिमा होमिएकी झाक्री बौद्धिक युवा नेतृका रुपमा चिनिन्छन् । उनको व्यक्तित्व र नेतृत्व क्षमताको खुलेर प्रशंसा गर्न लायक छन् ।
२०६५ सालको स्ववियु चुनावमा अनिराश्ववियूलाई पहिलो संगठन बनाउन सफल झाक्री २०६२/०६३ को जनआन्दोलनमा उनैको नेतृत्वमा युवा विद्यार्थी सडकमा ओर्लिएको थियो । आन्दोलनका क्रममा दुईपल्टसम्म टाउको फुट्यो उनको । गिरफ्तार हुने र छाडिने क्रम राजाले प्रत्यक्ष शासन हातमा लिएदेखि जनआन्दोलन सफल नहुञ्जेलसम्म नै चलिरह्यो । तर, उनी आन्दोलनबाट कहिल्यै पछाडि हटिनन्, सच्चाइको लागि लाडिनै रहिन् । त्यसैले नै उनका व्यक्तित्वबाट प्रभावित हुनेकाे स‍ंख्या उच्च थियाे ।
झाक्रीको चौतर्फी हाई हाई हुन्थ्यो । सफल मान्छेको चर्चा परिचर्चा टिप्पणी हुन स्वभाविकै हो । तर अहिले सार्वजनिक भएको उनको अडियो रेकर्डमा एकजना शिक्षकसँगको सामान्य टिकाटिप्णीलाई आफैले विकराल बनाइन् । उनी जुझारु त थिइन् नै उनमा सैह्य क्षमता भने रहेनछ भन्ने कुरा प्रष्ट्याएकी छिन् ।
राजाले प्रत्यक्ष शासन हातमा लिएपछि पनि कहीँ कतै विरोध कार्यक्रम नभए पनि पीके क्याम्पसमा हुन्थ्यो र त्यो यिनै झाक्रीकै नेतृत्वमा हुन्थ्यो । उनी राजनीतिमा सफल पनि भइन् । झाक्रीको चौतर्फी हाई हाई हुन्थ्यो । सफल मान्छेको चर्चा परिचर्चा टिप्पणी हुन स्वभाविकै हो । तर अहिले सार्वजनिक भएको उनको अडियो रेकर्डमा एकजना शिक्षकसँगको सामान्य टिकाटिप्णीलाई आफैले विकराल बनाइन् । उनी जुझारु त थिइन् नै उनमा सैह्य क्षमता भने रहेनछ भन्ने कुरा प्रष्ट्याएकी छिन् ।
निर्वाचन अघि गुल्मीमा भएको खुकुरी प्रहारको विषयमा स्थानीय शिक्षक बम बहादुर कुँवरले फेसबुकमा इभरेस्ट खबर अनलार्इनमा कांग्रेस प्रतिनिधिमाथि खुकुरी प्रहार भएपछि एमाले नेतृ झाँक्री प्रहरी सुरक्षामा भन्ने समाचार शेयर गर्दै ‘सबैका आँखा फुटेका र आफूले संसार राम्रो देख्ने राष्ट्रबादी पार्टीका राष्ट्रिय नेताले आफ्नो औकात देखाउनु भयो । सलाम छ तपाइँलाई ।’ भन्ने स्टाटस लेखेका थिए । यसै स्टाग्रामका कारण एमाले नेतृ झाँक्रीले फोनमार्फत कुँवरको हातखुट्टा भाँचिदिने धम्की दिइन् । धम्की मात्र होइन् अती तुच्छ शब्द समेत प्रयोग गरेकी छिन् ।
आफ्नै गाउँका शिक्षक तथा कांग्रेस कार्यकर्ता कुँवरलाई यसरी धम्क्याएको अडियो सार्वजनिक भयो अनि अहिले सामाजिक सञ्जालहरुमा उनीको यो धम्कीपूर्ण अडियो भाइरल बनेको छ । उक्त अडियो सुन्दा उनको अर्को राजनीतिक धरातलमाथि नै प्रश्न उठ्न थालेको छ ।
सामाजिक सञ्जालमा लेखिएका कुनैपनि विषयमा आफ्नो चरित्र हत्या भएको लागेमा प्रहरीलाई खबर गर्न सकिने अवस्था हुँदाहुँदै दादागिरि शैलीमा झाक्रीले ‘तेरीमा गधा तेरा हातखुट्टा भाँची दिन्छु’ भन्ने धम्कीपूर्ण तुच्छ भाषा बोलेकी छिन् । २ मिनेट ४८ सेकेण्ड लामो अडियोमा झाक्रीले बोलेको तथानाम गालीहरु सुन्न सकिन्छ । आफ्नै गाउँका शिक्षक तथा कांग्रेस कार्यकर्ता कुँवरलाई यसरी धम्क्याएको अडियो सार्वजनिक भयो अनि अहिले सामाजिक सञ्जालहरुमा उनीको यो धम्कीपूर्ण अडियो भाइरल बनेको छ । उक्त अडियो सुन्दा उनको अर्को राजनीतिक धरातलमाथि नै प्रश्न उठ्न थालेको छ ।
कसैलाई पनि अपाच्य हुने गरी बोलेको उनका ती तुच्छ शब्दले यसअघिसम्म उनकाे व्यक्तित्वबाट प्रभावित हुनेहरुमध्यमै कतिले ‘झाक्रीको दिमागी हालत ठिक नभएको त होइन ?’ भन्ने पनि लागेकाे छ भने कतिले उनले दम्बको भरमा यस्तो बोलेकी हुन् भनेका छन् । उनको यस्तो धम्कीपूर्ण भाषाले उनको राजनीतिक जीवनमा कत्तिको असर पार्ला त्यो आगामी दिनले देखाउने छ ।
ट्याग्स: pushpa mahara, Ramkumari Jhakri